Global Voices teny Malagasy » An’arivony ireo Hazomirary Sokitry Ny Japoney Iray no Lasa Hita Aty Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
An'arivony ireo Hazomirary Sokitry Ny Japoney Iray no Lasa Hita Aty Anaty Aterineto
Voadika ny 22 Jona 2017 11:21 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Mediam-bahoaka, Saripika, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Antsipirihany avy amin”ilay Fujiwara Hidesato Mpiady Nanohitra ny Centipede Goavambe ” nataon'ilay artista mpanao sary hazomirary Katsukawa, Shuntei, 1770-1820. Angano malaza mitondra lohateny hoe “My Lord Bag of Rice ” no aingam-panahy nitsirian'ilay sary hazomirary, angano ahitàna ireo mpiady miady aminà orita gaovambe iray teo akaikin'ny tetezana Seta ao amin'ny Farihy Biwa Japàna. Fampiresahana ny sary niarahana tamin'i Matt Alt sy Matthew Penney.
(Fanamarihana: ny sary hazomirary dia zavakanto japoney fanaovana sary amin'ny alàlan'ny fandidiana sy fampitambarana hazokely marobe sy fametrahana azy hitovy tantana ho lasa sary mahafinaritra)
Sary hazomirary niisa 2.500 teo ho eo no navoakan'ny Tranombokin'ny Kaongresy Amerikana ho eny amin'ny sehatra natao ho an'ny daholobe ao anatin'ilay rakitahiriny ety amin'ny aterineto “Sary hazomirary Voakaly: Japoney talohan'ny 1915.” 
Ny rakitahiry ety anaty aterineto an'ilay Sampana Sary hazomirary sy Saripika ao amin'ilay Tranomboky dia manangona sy mitahiry ireo sary hazomirary sy saripika manaraka fomba fanao artistika roa, Ukiyo-e  sy Yokohama-e avy amin'ny vanimpotoana Edo (1600-1868) sy Meiji (1868-1912) .
Araka ny ambaran'ny Tranombokin'ny Kaongresy, “Ny taokanto Japoney fanaovana ny Ukiyo-e novokarina tao an-tanànan'i Edo (Tokyo ankehitriny) nandritra ny Tokugawa na Vanimpotoana Edo (1600-1868),somary nandry fahalemana ihany nandritra ny 250 taona nifehezan'ireo “shoguns” tao Tokugawa an'i Japàna ary nanao ny an'i Edo ho seza fiketraham-pahefana ho an'ny shogun.”
Ho an'ny resaka Yokohama-e, marihan'ny Tranombokin'ny Kaongresy fa taorian'ny fifanaraham-barotra vaovao iarahana amin'ny Tandrefana, vetivety i Yokohama dia lasa foiben'ny varotra iarahana amin'ny any ivelany, nanomboka tamin'ny 1850:
Ho an'ireo artista Japoney, ny seranantsambo ao an-tanànan'i Yokohama dia lasa mpikotrika sokajinà sary izay ifamikiran'ny fomba sy ny zavabaovao. Amin'ny fananganana eo ambonin'ny fomba famokarana sy ny haivarotra napetrak'ireo artista Ukiyo-e sy ireo mpanonta, nanomboka nandefa artista ho any Yokohama ireo Edo mpanonta boky mba hijery ambangovangony ireo vahiny any amin'ny misy azy. Ireo lehilahy mpangataka sy ireo vehivavy mitafy zipo rebareba mitety ny tanàna, miakatra sy midina ny sambo, mitaingina soavaly, mankafy ireo fialamboly ao an-toerana, ary mifanerasera tsy mitsahatra amin-javatra tsy hita fetra, miainga avy aminà kapoaka ka hatramin'ny lohanà fiarandalamby.
Mampiseho rakitahirin-tsary hazomirary marobe ny Tranombokin'ny Kaongresy, ahitàna ireo mpiantsehatra,  vehivavy , faravodilanitra , toerana avy amin'ny literatiora Japoney , fiainana andavanandro  ao Japàna, ary fomba fijerin'ireo Tandrefana ao Japàna .
Indro ireo ohatra vitsivitsy monja avy amin'ny rakitahirin'ny Tranombokin'ny Kaongresy :
Famaritana: “Hana noen shanaō” an'i Utagawa, Kuniyoshi, 1798-1861. “Asehon'ny sary ny olona iray, angamba ilay mpiady Ushiwakamaru (Minamoto no Yoshitomo) toy ny tovolahy tanora iray, mihanika hazo ary mampiasa kibay mba haniratsiràna ireo rakakabe maka endrik'olombelona (goblins) izay maka tapakazo ho fiarovana ny tenany; misy lahiantitra iray resin-tory miankina ampototry ny hazo etsy aoriana.”
Famaritana: “Volana amin'ny alina eny an-tampon'ny Tendrombohitra Manno” an'i Taiso Yoshitoshi, 1839-1892. “Asehon'ny sary ny mpanao majika iray toy ny demony misy elatra ary ny hohony mitazona taratasy iray misy soratra manoloana vehivavy iray tena lava volo be.”
Famaritana: “Toerana fonenan'ny vahiny tao Yokohama” an'i Utagawa, Yoshikazu, 1848-1863. “Sary hazomirary Japoney maneho ny lakozia iray misy sakafo eo ampikarakaràna ary ireo efitrano mifanila aminy, ao anatin'ny efitra iray misy lehilahy miaratra, tao amin'ny trano ireo fipetrahan'ny vahiny tao Yokohama, Japàna.”
Famaritana: “Hazakaza-tsoavaly tao amin'ny Kianja Ueno, an'i Hashimoto, Chikanobu, 1838-1912 .”Sary triptika Japoney mampiseho mpitaingina soavaly eo an-damosin'ny soavaly mihazakazaka amin'ny làlana mihodidina ny farihy iray. Manamboninahitra iray ao amin'ny tafika Japoney sy vehivavy Japoney mijery ilay hazakazaka avy eny ambony lampihazo iray voahaingo. Biby sy zavatra milatsaka avy any an-danitra.”
Famaritana: “Vehivavy iray manoratra momba ny fahatsiarovana ireo toerana notsidihana”. Tsy fantatra ny anaran'ny tompon'ny asa.
Afaka jerena manontolo ato  ilay rakitahiry.
Araka ny voalazan'ny Tranombokin'ny Kaongresy, tsy misy fameperana fantatra momba io rakitahiry io,  ary omena alàlana ny fampiasàna azy “ara-drariny “.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/22/102620/
 My Lord Bag of Rice: https://en.wikipedia.org/wiki/My_Lord_Bag_of_Rice
 “Sary hazomirary Voakaly: Japoney talohan'ny 1915.”: https://www.loc.gov/collections/japanese-fine-prints-pre-1915/
 Yokohama-e avy amin'ny vanimpotoana Edo (1600-1868) sy Meiji (1868-1912): https://www.loc.gov/collections/japanese-fine-prints-pre-1915/about-this-collection/#yokohama
 literatiora Japoney: https://www.loc.gov/collections/japanese-fine-prints-pre-1915/?q=&fa=subject:Literature
 fiainana andavanandro: https://www.loc.gov/collection/japanese-fine-prints-pre-1915/?q=&fa=subject:Domestic%20life
 Tandrefana ao Japàna: https://www.loc.gov/collections/japanese-fine-prints-pre-1915/?q=&fa=subject:Foreign%20visitors
 tsy misy fameperana fantatra momba io rakitahiry io,: https://www.loc.gov/rr/print/res/371_japa.html
 ara-drariny : http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use